Trump: Waan Ka Xumay Waxa Ku Dhacay Micheal Flynn, FBI-du Noloshiisii Oo Dhan Bay Burburiyeen – Heemaal News Network
“Waxaan u damqanayaa Jeneral Flynn” ayuu yiri Trump oo weriyayaasha la hadlay “Wuxuu haystay nolol aad u xooggan, waana ka xumahay hadda”.
Flynn ayaa jimcihii qirtay inuu uga been sheegay FBI-da bishii January ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka Ruushka ee Mareykanka.
Trump ayaa beenta Flynn ee FBI-da la meel dhigay hadalladii ay Hilary Clinton u sheegtay FBI-da mar wax laga weydiinayey isticmaalkeeda email shaqsi ah, intii ay ahayd xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka.
“Hillary Clinton waxay u been sheegtay FBI-da marar badan, balse waxba lagama qabin. Flynn been ayuu sheegay laakiin noloshiisa ay burburiyeen. Taasi wa aceeb” ayuu yiri Trump.
Goob Jooge warbaahinta Uga waramay Sida Uu U Dhacay Weerarkii Lagu Qaaday Magaalada Las Vegas
October 2, 2017 Caalamka
Trump Oo Hambalyeeyey Saaxiibkii Putin Kadib Markii Ay Dhabarka U jeediyeen Madaxda Reer Galbeedku
March 20, 2018 Caalamka
Trump: Anniga Ayaa Ka Danbeeyey Awooda Dheeraadka Ee Uu Leeyahay Dhaxal Sugaha Dalka Sacuudigu
Buug cusub oo ku salaysan wareysiyada ka soo baxay madaxda haysa xogta Aqalka Cad ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka danbeeyay heerka sare ee uu gaaray Mohammed bin Salman ee […]